Ny fizahan-tany KwaZulu-Natal dia miandrandra fampindrana vola be mandritra ny volana fialantsasatra manaraka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Afrika atsimo » Ny fizahan-tany KwaZulu-Natal dia miandrandra fampindrana vola be mandritra ny volana fialantsasatra manaraka
Ny faritanin'i KwaZulu-Natal (KZN) dia manantena ny fahatongavan'ireo mpizahatany betsaka noho ny fisehoan-javatra lehibe izay hitranga ao anatin'ny telo herinandro sy ny toetr'andro mafana ho karatra fisarihana lehibe, hoy ny MEC ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena, fizahan-tany ary ny tontolo iainana. , Andriamatoa Sihle Zikalala.
KwaZulu-Natal dia miandrandra fampindrana vola be satria mpanamboatra fialantsasatra an-trano maherin'ny 1.2 tapitrisa no antenaina hirohotra any amin'ny faritany mandritra ny fialantsasatra mandritra ny telo herinandro amin'ny ririnina manomboka ny 22 Jona ka hatramin'ny 17 Jolay 2018.
“KZN dia hisintona ny fijanonana rehetra mba hiantohana ny fialantsasatra amin'ny kalandrie hetsika feno hipoka ao Durban sy manamorona ny morontsiraka KZN hifanaraka amin'ny tsiro rehetra. “Anisan'izany ny Jolay Vodacom Durban; The Dundee July, The Soul and Jazz Experience in Richards Bay, the Sardine Festival in Port Edward, the iSimangaliso Trail Challenge in St Lucia, and many more, ”hoy i Zikalala.
Ny fialantsasatry ny ririnina dia fotoana mety indrindra hamonosana ny kitaponao ary handehananao mankany KwaZulu-Natal (KZN), hoy ny filoha lefitra misahana ny fizahan-tany KwaZulu-Natal, Phindile Makwakwa.
“Ity no fotoana mety indrindra ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany eto an-toerana hampiroboroboana ny KZN sy ny fanomezana fizahantany rehetra ao aminy; manomboka amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny berg, mankany amin'ireo valan-javaboary sy ireo zotra fizahan-tany miavaka maro ananantsika. Ny fizahantany dia mandray anjara amin'ny valo isanjaton'ny vokatra anatiny ary mampiasa 6.5% amin'ny mpiasa eto amin'ny firenena. Izy io dia antony manosika lehibe iray hanovana ny faritany ara-toekarena. ”
Mpampiroborobo ara-toekarena lehibe ny fizahantany amin'ny alàlan'ny fandraisany anjara amin'ny sehatra hafa isan-karazany toy ny fampiantranoana, fitaterana, zavakanto ary asa tanana izay anisan'ny gadona soatoavina fizahantany, hoy i Makwakwa.
Charles Preece, mpitantana ny asa any East Coast an'ny Fikambanana Federaly mandray vahiny ao Afrika atsimo, (FEDHASA), dia nilaza fa ny fialan-tsasatry ny ririnina dia vanim-potoana tsara ho an'ny indostria miaraka amin'ny famandrihana trano fandraisam-bahiny hita fa matanjaka.
“Mbola misy toerana malalaka, saingy manantena vanim-potoana tsara isika. Ny morontsiraka atsinanana no toerana tena tian'ny mpitsidika anaty tany manantena ny handositra ny hatsiaka, ”hoy i Preece.
FEDHASA dia matoky fa aorian'ny haavon'ny olona ambony tamin'ny taon-dasa dia tsy hisy tsy hitovizany amin'ity vanim-potoana ity. Ny manampahefana misahana ny fifamoivoizana dia manantena mialoha ny habetsahan'ny fifamoivoizana hatrany amin'ny morontsiraka atsinanana amin'ity vanim-potoana ity.
Afaka manantena fidiran'ny fiara amin'ny arabe KZN ny olona iray - indrindra amin'ny làlambe sy ny toerana manintona mpizahatany eo an-toerana.
Ny volana Jolay Vodacom Durban izay hatao ny 7 jolay izao dia hipoka amin'ny vahoaka marobe ary antenaina hisarika olona 50 000 amin'ny andro firazanana. Ny tsindrona vola tamin'ny 2017 avy amin'ny VDJ dia R260 tapitrisa tao anatin'ny toekarena KZN. Tamin'ity taona ity, ny fandraisana anjara amin'ny harinkarena faobe harahin'i eThekwini dia vinavinaina ho eo amin'ny R159 tapitrisa ary hitondra R10 tapitrisa amin'ny hetra avy amin'ny governemanta ary koa hamorona asa 320 isan-taona.
Ny KZN Travel and Adventure izay atao ny 5-8 jolay dia hahita mpizahatany manana fahalalahana amin'ny fizahan-tany ihany koa, izay vonona hisarika olona 30 000 - 40 000 ao anatin'ny efatra andro.
KZN dia malaza amin'ny toetrandro ririnina malefaka, morontsiraka ary toerana manintona toa an'i uShaka Marine World. KZN dia manana toetrandro ririnina tena tsara miaraka amin'ny andro mafana tsara mety amin'ny fandaniam-potoana miditra sy ivelan'ny surf amin'ny moron-dranomasina madio.
Ny Air Norvezy dia mampitombo ny serivisy avy any Etazonia ka hatrany Martinique
Horohoron-tany 6.1 mahery no namely ny nosy Vanuatu